Chad - Fikradda Fikradaha: Maamulka ayaa lagu dhiibay Sudo-Chadian Sudoopad - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Chad - Fiber Optical: Maamulka ayaa wakiil ka ah shirkadda Sudaan-Chad
Chad - Fiber Optic, Photo Credit: Greta
[Africa Business Business] - Dalka Chad, ayaa dawladdu go'aansatay in ay ku wareejiso maamulka muraayadaha farsamada ee bulshada Suudaan-Chad Sudatchad. Tani waa mid ka mid ah qaraarada lagu ansixiyay 26 March March 2019 ee Golaha Wasiirada. Sida laga soo xigtay xukuumadda Chadian, dhamaystirka shaqooyinka kala duwan ee fiber optics ee dalka waa in ay u oggolaadaan in ay waddanka u furaan tiro badan: " Qoraalka qabyo qoraalka ah ayaa si buuxda u waafaqsan barnaamijka ballaaran ee wasaaradda si loo dhiso kaabayaasha fiber-optic si ay u xiraan shabakadaha caalamiga ah iyo isdhexgalka caasimadaha gobolka iyo gobollada shabakada internetka oo laga heli karo guud ahaan dalka oo dhan ».
By abaalmarinta suuqa maareynta fiber optic to Chad In Sudatchad, shirkadda ayaa sidaas loo oggol yahay in ay ku rakibaan fiber fiber-ka oo dhan dalka. Sida laga soo xigtay saadaalinta xukuumadda Chad, shabakadda farsamada fiber-ka ee la xidhiidha Njamena à Adre waa in la kordhiyaa ku dhowaad 800 km.
Kaliya ku xirnaanshaha suuqyadani waxa ay isku xireysaa jawi Chadian ah oo calaamad u ah faafreeb aan horay loo arag oo adeegga Internetka ah oo ay dawladdu leedahay. Bishii Maarso 2018, dawladdu waxay go'aansatay in ay joojiso, ama ugu yaraan, si xaddidan u xaddidna u galiso shabakadaha bulshada, iyo caalamka oo dhan internetka dalka. Ku noqoshada Abriil 2019, kormeerku waa isku mid: Internetka ayaa had iyo jeer xaddidaya.
Xaalad khatar ah oo ka jirta furitaanka Chad ee adduunka. Tani, horeyba, waddanku ma muujiyo natiijooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan ka mid noqoshada dhijitaalka, oo ka mid ah kuwa ugu dambeeyay Afrika. Inkasta oo celcelis ahaan Afrikaan ah marka la eego helitaanka internetka waa 37,4%, qiimahaasi waa 5% kaliya ee Chad. Isla markaa, marka loo eego tirada dadka isticmaala warbaahinta bulshada ayaa sii kordhaya wadamada kale ee Afrika, Chad, waa ta soo horjeeda. Laba iyo tobankii bilood ee ka horreeyey Janaayo 2019, adeegsiga warbaahinta bulshada ayaa hoos u dhacay dadka isticmaala 150 000, ama 54%.
Sidaa daraadeed, si suurtogal u ah in Sudingadku uu faa'iido u helo, waxaa lagama maarmaan ah in lagama maarmaan noqoto in la qaado xannibaadda internetka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.digitalbusiness.africa/%EF%BB%BFtchad-fibre-optique-la-gestion-confiee-a-la-societe-soudano-tchadienne-sudatchad/